Fomba tsotsotra hikarakarana ny macaroni – jEreo Ato
Publié le 8 mars 2019 8 mars 2019 - 1 minute de lecture Catégories CuisineÉtiquettes macaroni, Sakafo
Misy karazany maro ny nahandro eto Madagasikara. Fa anio, ny nahandro ho atolotra antsika dia fomba tsotsotra hikarakarana ny macaroni : macaroni amin’ny sardines. Na dia sakafo avy any ivelany aza izy ity dia tsy latsa-danja amin’ny fandrahoana azy isika eto an-toerana. Ndeha ary ho jerentsika izany sakafo izany.
Inona moa ny akora hampiasaintsika eto?
Sira sy menaka ary rano
Ny faharetan’ny fandrahoana azy
Ny fandrahoana ity sakafo ity dia maharitra eo amin’ny 22 minitra eo.
Ny zavatra atao amin’ny fikarakarana azy
Ny zavatra atao voalohany dia mampangotraka rano. Arakaraka ny habetsaky ny macaroni no hanaovana ny fatran’ny rano ampangotrahina.
Avy eo rarahana sira sy menaka ny rano nampangotrahina. Avela hanerinerina mihitsy aloha ireo mba hangotraka tsara. Rehefa hita fa mangotraka dia arotsaka ilay macaroni ka jerena matetika ilay izy sao masaka loatra.
Rehefa hita fa manomboka efa mihamalemy ilay macaroni dia esorina amin’izay. Arotsaka ao anaty rano mangatsiaka izy mba tsy hampiboledaka azy. Izany hoe mba hampihenjakenjana azy raha tratr’iny rano mangatsiaka iny.
Tsihifina tsara ilay izy avy natao tao anaty rano mangatsiaka teo.
Manarak’izay, alaina ny sardines ka potepotehina mandinika tsara amin’ny vilia. Rehefa mitsika tsara ny rano tamin’ny macaroni dia ampifangaroina amin’ny macaroni ny sardines. Fafazana dipoavatra araka izay mahamety. Afangaro tsara avy eo ary asiana sira kely raha ohatra ka tsy ampy.
Anisan’ny sakafo mora vita, tsotra nefa tsara ity nomena antsika ity. Anisan’ny sakafo ankafizin’ny olona ihany koa satria sady malaky mahavoky no tsara rahateo.